UYESU WAYENYANISEKA KUTHIXO NOMNTU WENYANISO
Kule post UYesu oyinyaniso nomntu oyinyaniso, yazisa abafundi abathembekileyo ngobukho boNyana kaThixo ngelixa wayehamba emhlabeni, esenza imimangaliso kwaye enxibelelana nabapostile bakhe. Inomdla kakhulu ukuba akufuneki uyeke ukuyifunda.
1 UYesu oyinyaniso nomntu oyinyaniso
1.1 UYesu kwizibhalo ezingcwele
1.2 Ezinye iindinyana zebhayibhile
1.3 Ukuzalwa kukaYesu
2 Uthetha ntoni uThixo oyinyaniso nomntu oyinyaniso?
UYesu oyinyaniso nomntu oyinyaniso
UYesu waziwa njengothixo oyinyaniso nendoda eyinyani, njengoko isekiwe yimfundiso yezimilo ezimbini ngexesha leBhunga laseCalcedon, oko kukuthi, ibhunga lobunye bobunye obabubanjwe ngomhla we-8 ka-Okthobha no-Novemba 1, 451 AD
UYesu kwizibhalo ezingcwele
UYesu ubizwe nguThixo, njengoThixo oyinyaniso noMsindisi, ke ngoko, kunokuxabiseka kwizibhalo ezingcwele kuTito 2:13; U-2 Petros 2: 1, mna Yohane 5:20, umxholo wakhe ungunaphakade, kananjalo nokaThixo uYise, njengoko kubonakalisiwe kuYohane 1: 1, Mika 5: 2.
Kwizibhalo ezingcwele oko kungqinwa kuMateyu 3:17, kunika ukholo lokuba uYesu unguye uNyana kaThixo oyinyaniso, ngexesha lokubhaptizwa kukaYesu, kwavakala ilizwi livela ezulwini lisithi: “Lo nguNyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye ”.
Kwangokunjalo, kwenzeka ngexesha lokwenziwa kumila kumbi njengoko kubonisiwe kuMateyu 17: 5, uYise wagxininisa ukuba uYesu nguNyana kaThixo, esithi makamelwe ukuviwa.
KuYohane 6:44 naku-14: 6, thandaza la mazwi akhankanywe nguYesu: "Akukho namnye unako ukuza kum, engathanga aziswe nguBawo owandithumayo" nokuthi "Akukho namnye uzayo kuBawo engezi ngam", bathi uThixo , uYise noThixo uNyana banocwangco olufanayo oluphezulu kunye negunya.
Kwizibhalo ezingcwele kunganconywa kuYohane 10:30 ngendlela uThixo oyinyaniso, uYesu, angangqina ngayo "Mna noBawo sibanye", wathetha ngendlela elula enohlobo olunye lukaYise.
Iindinyana ezininzi kwibhayibhile zikhankanya uYesu njengendoda eyinyani, njengoko kubonakala kumaHebhere 4:15.
Ezinye iindinyana zebhayibhile
Unokuzixabisa ezinye iivesi zeBhayibhile apho kungqinwe kwaye kwavunywa khona ukuba uYesu Krestu nguThixo oyinyaniso nendoda eyinyani, masibone ukuba babhekisa kweziphi:
ULuka 24:52, indlela abaPostile abenza ngayo emva konyuko: "Bona, emva kokunqula 'uYesu Krestu' wabuya."
UYohane 1:18, “Akukho namnye wakha wambona uThixo; uNyana okuphela kwamzeleyo, lowo usesifubeni sikaYise, nguye ocacise oko.
Yohane 20:28, yintoni eyakhankanywa nguMpostile uTomas emva kokubona oVukileyo: "Nkosi yam, Thixo wam!"
Col. 2: 9, ukuvuma ubume bukaKristu eculweni: "Kuhleli kuye konke ukuzaliseka kobuThixo."
UYohane 5:20, apho uYohane anika khona ubungqina: “Kwaye sikuye oyinyaniso, kuye uNyana wakhe uYesu Kristu. Lo nguThixo oyinyaniso, nobomi obungunaphakade.
EyokuQala kuTimoti 1:3: "UThixo wabonakalaliswa esenyameni."
Ukuba uyifumene le post ngoYesu inomdla, sikumema ngokufudumeleyo ukuba ufunde eli nqaku: Umprofeti uEliya.
Xa uYesu weza emhlabeni, ubomi bakhe baqala, kuba wayesele ekunye noYise ngaphambili, njengoko kunokubonwa kuYohane 1: 1, nangona kunjalo, ngokuzalwa kwesenzi ubuntu bakhe baqala.
Nje ukuba athathe inxaxheba kwindalo yomntu, wayephantsi kwayo yonke into ahlangabezana nayo umntu ngobukho bakhe basemhlabeni, ukusuka kwinkqubo yokuzalwa, ukukhula, ukukhula, ukufunda, ukuva indlala, iintlungu, ukulala, kanye njengokuba wayelingwa kwaye ehlaselwa idemon.
Onke la mava wayephila enyameni yakhe ngexesha lakhe njengendoda, kodwa hayi njengoThixo. Kuyabonakala kuTimoti 1 2: 15, ukuba onke la mava ayimfuneko ukuze uYesu Kristu aphile ngawo, kuba kwimeko yakhe njengendoda wenza njengomlamli okuphela kwakhe, phambi kukayise, uThixo umsindisi wethu, kuba indoda ayinayo amandla okusindisa umhlaba.
Uthetha ntoni uThixo oyinyaniso nomntu oyinyaniso?
Xa siqala umthandazo wabapostile ngokuthi “Ndiyakholelwa… kuYesu Krestu, uNyana okuphela kwakhe, iNkosi yethu; ukuba wakhawulwa ngomsebenzi nangobabalo loMoya oyiNgcwele, kwaye wazalwa ngeNtombikazi enguMariya ”.
Kuxa siqala ukuwenza nzulu umxholo wayo, yinyani ebonakaliswayo ngaphambi kokholo lwethu ngokuzityhila kukaThixo ngoYesu Kristu, kwaye ngenxa yokuba le njengenye inyaniso ebonakalisiweyo, inokufunyanwa kuphela ngokholo olupheleleyo.
Ngokwenene, uYesu wayelangazelela ukuba abafundi bakhe nabo babemphulaphule beze bodwa ukuze bafumanise ukuba uNyana womntu wayenguNyana kaThixo wokwenene. Oku kunokubonwa kubuvumo bukaSimon Peter, xa wayefika kufutshane naseKesareya yakwaFilipu.
Kulapho uYesu aqala khona ukubuza abaPostile imibuzo kwaye kulapho uPetros waqonda ngokucacileyo ukuba ungubani na, eqinisekisa ubungqina bakhe embiza ngokuba "usikelelekile", kuba ayikuyo inyama okanye igazi ekutyhilele oku, kodwa ke Bawo ”, le ndawo yebhayibhile ifumaneka kuMateyu 16,17:11,27. NguYise onika ubungqina boNyana, kuba nguYe kuphela omaziyo uNyana, onokubonwa kuMateyu XNUMX:XNUMX.
Ingabonakala kwiincwadi zeVangeli uYesu Krestu ofumana indumiso, esenza isenzo esingafunyanwa nguThixo kuphela, njengoko kunokubonwa kuhlonelwa uYise.
Kukwabonwa ukuxolela izono, ukugxotha imimoya emdaka imveliso, ukuphilisa abantu abagulayo, ukuvusa abafileyo, ukulawula umoya nolwandle.
Nangona kunjalo, kukwaboniswa ukuba uyakhala, ufumana ubunzima kunye neentlungu, ukuphathwa gadalala ngokungathi wayengoyena mntu ulilolo owayekhona eluntwini. Zonke ezi zinto zifundisiwe kwizibhalo ezingcwele, abathembekileyo bawafumana onke la mava aphilwa nguYesu.
Ngokuqinisekileyo kumntu wendalo, kunzima kuye ukuba ayiqonde inyani, uyayiqonda kuphela xa uMoya oyiNgcwele umchukumisile kwaye uyityhila kuye entliziyweni yakhe, kulapho ke yamkelweyo.
Kwizibhalo ezingcwele, imfundiso ibonakala ngathi, ukufikelela kuThixo uYise, inye kuphela indlela, kwaye indlela ingoNyana wakhe uYesu Krestu, nangona kunjalo, yokwazi ukuba uYesu uyiNkosi, umnini nomlawuli wendalo iphela, kunyanzelekile kukhanyiselwa bubukho boMoya oyiNgcwele.